साउन ३ गतेकाे राशिफल, हेर्नुस् तपाईंको आजकाे दिन कस्ताे छ ?::देश र जनताप्रति समर्पित
आज बि.स. २०७६ साल साउन ३ गते शुक्रबार इश्वी सन् २०१९ जुलाई १९ तारीख श्रावण कृष्णपक्ष तृतिया तिथी धनिष्ठा नक्षत्र आयुष्मान योग वणिज करण चन्द्रमा मकर राशिमा १३ः५६ बजे सम्म पश्चात कुम्भ राशिमा आनन्दादि योगमा धाता योग सुर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु स्वामी श्रीप्राणनाथजी धाम सवारी भएको दिवस ।
ईष्ट मित्र बिच सामान्य बादबिवादको योग रहेको छ । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्नेछ । मध्यान पश्चात मित्र तथा दाजु भाई बिचको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । आटँ र शाहसमा बृद्यि हुनेछ । मनोरञ्जन मुलक यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । माल सामान हराउन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । अपरीचित ब्यत्तिहरुको बिश्वासमा नपरेकै बेश रहनेछ ।
नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आट र साहशको कमि आउनेछ । भौतिक स्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुने योग रहेको छ । मध्यान पश्चात ब्यक्तिव बिकाशमा जुट्ने समय रहेको छ । कुलकुटुम्ब हरुको साथ सहयोग राम्रो प्राप्त हुनेछ । अनावश्यक खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । खानपानको गडबढिका कारण स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
असार २५ गतेकाे राशिफल कुन राशिका लागि कति फलदायी छ ? हेर्नुस्
साउन १७ गते कुन राशिका लागि कति शुभ ? हेर्नुस् राशिफल
असाेज १२ गते तपाईंको दिन कस्ताे छ ? हेर्नुस् आजको राशिफल